Anofara ekunze sanganisa mbeu | MyWeedSeeds.com
Anofara Kunze Kusanganiswa
Mamiriro ekunze: kunze
Nguva yemaruva: zvakasiyanasiyana
THC nhanho: zvakasiyanasiyana
Inofara Kunze Kwekusanganiswa inogona kurira senge 6-rongedza remazhizha petunias, asi kure nazvo! Ndipo pane mbeu diki dzembanje dzisina imwe imba yekufara. Sezvo isu tichishanda kugadzira matsva matsva uye nekuvandudza maronda aripo, genetics dzimwe nguva inotishamisa isu. Dzimwe nguva tinogadzira mhodzi tisina hunhu hwatinotsvaga, kunyangwe iri 100% inoshanda. Nekudaro, isu tinovapakira seRufaro rwekunze Musanganiswa wekushamisika kwako uye kunakirwa. Happy Outdoor Mix inosanganisirawo yatinodaidza kuti, "Zvasara," mbeu dzisingatengeswi panosvika goho idzva. Tinotengesa goho idzva uye tinorongedza mbeu dzakura seHappy Outdoor Mix. Edza Kufara Kwekunze Kusanganiswa kweinonakidza yekubata-bhegi remhando nyowani dzemiti, zvinonaka, uye zvakakwirira. Isu tinochengeta mutengo nemazvo, saka hapana mbeu inoenda kunoparara uye iwe unowana isingadhuri assortment. Yedu Happy Outdoor Mix inotengesa mbeu makumi matatu nemutengo wakaderera zvikuru. Nekutenga kwega kwega, iwe unogashira makumi maviri ekuwedzera Anofara Outdoor Sanganisa mbeu (panzvimbo yepakiti remahara).